Musharax xasan sheekh maxamuud iyo.Doorashada Soomaaliya tirinta codadka wareegga labaad oo billaabatay BBC News Somali
Musharax xasan sheekh maxamuud iyo
Posted on 05.05.2019 05.05.2019 | by Shamuro
Kaabayaasha dhaqaalaha, waxaan ka shaqeyn doonaa haddii alle yiraahdo dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, buundooyinka, kanaallada, dekaddaha iyo garoomada diyaaraddaha, waxaan hirgalin doonaa mashaariic cusub oo lagu dhisaayo kaabayaal cusub gobolada dib u dhacsan sidii heerka nolosha bulshada u noqoto mid isu dheeli tiran. May 25, Boorar midabyo badan leh oo ka muuqda caasimaddan xeebta dhacda ayaa bixinaya dareenka ah in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee Arbacada dhacaysa mid la mid ah kuwa kale, taasi waa mid xaqiiqda ka fog. Gobolka Banaadir ayaa ka mid ah meelaha ay soo gaarayaan dadka abaaraha ka soo barakacay gaar ahaa dagmadda Kaxda. Mudane gudoomiye, Mudanayaal iyo Marwooyin, Xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo marti sharafta nagala soo qeyb gashay fadhigaan, salaan ka gadaal, waxaan u mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad i siiseen, si aan idiinku soo bandhigo aragtidayda siyaasadeed ee la xiriirta hogaaminta dalka xili Soomaaliya ay qabto baahi is-badal iyo hoggaamineed oo leh karti, hufnaan kaasoo ku shaqeynaya caddaalad, nabad iyo horumar. Gudoomiye Maxamed Ismaaciil ayaa intaa ku daray in dadka abaaraha ka soo barakacay ay heystaan dhibaatooyin nololeed oo aad u daran waxaana uu sheegay in iyaga oo kaashanaya maamulka gobolka Banaadir ay sameeyeen meela cunta loogu kariyo.
SBS Language Booqashadii Todobaadka aheyd ee Siyasiyiinta Mucaaradka
Wareysi Madaxweyne Xasan Sheekh
Xasan Sheekh oo socdaal ku tegay Beledweyne
Musharax Xasan sheekh Maxamuud oo ku guuleystey doorashadii waxaana markii danbe iska casiley 2da musharax ee |Gaas iyo cosoble oo waxaa isugu. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in waxa xilligan qabyada ah dhaqaalaha iyo adeegga bulshada, asaga oo qiray in wax badan oo.
Madaxweynihii hore ee Somalia Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Xasan Sheekh ayaa ah musharax u taagan xilka madaxweynaha.
Doorashada Soomaaliya: tirinta codadka wareegga labaad oo billaabatay 8 Febraayo Siminaar Ku saabsan Xuquuqul Insaanka oo lagu qabtay deegaan ka tirsan Galmudug.
July 27, Notify me of new posts by email. Tiradda dadka abaaraha Kasoo barakacay ee Muqdisho soo gaaray oo sii kordheysa. Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in hal xildhibaan oo xanuusan uu maqan yahay.
Lubna Khan ku xigeenka safiirka Mareekanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dhiira galinayaan haweenka la soo doortay ee ku jira aqalka sare iyo golaha shacabka ee Barlamaanka Soomaaliya sidi door Wadajir ah ugu qaadan lahaayeen arimaha haweenka iyo hormarintooda.
HEYDAR ALIYEV FOUNDATION LOGO SKATEBOARD Inkastoo Matt Bryden, agaasimaha hay'adda cilmibaarista ee Sahan ahna qabiir siyaasadda Soomaaliya annu rumaysnayn in hannaanka doorashadu uu noqon karo xor iyo xalaal, haddana wuxuu sheegay in uu yahay mid ka fiican arrimo kale.
Rabshado, cagojugleyn iyo laaluush ayaa harreeyey qorshaha sida uu sheegay hawlgalka Qaramada Midoobay oo sidoo kale cambaareeyey go'aanka ah in musharaxiinta la eedeeyey aan lagala noqon xubinnimadda. Madaxweynaha waxaa dooran doona xildhibaan oo uu ka kooban yahay golaha sharci dajinta iyo 54 xubnood ee aqalka sare.
Maanta oo kale 8-dii bishii Sebteembar, waxa ay ahayd maalintii uu jeediyey khudbadiisa musharaxnimo markii uu xilka madaxweynenimada u tartamayay Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, xilkaasi oo labo maalin kadib ku guuleystey.
Siminaar Ku saabsan Xuquuqul Insaanka oo lagu qabtay deegaan ka tirsan Galmudug. Guddiga Qaran ee gurmadka abaaraha ayaa war-saxaadadeed ay soo saareen waxa ay uga hadleen Xaaladda Abaaraha ka jira Dalka.
Xasan Sheekh Maxamuud (Carabi: حسن شيخ محمود ) (dhashay 29 Novembar ) waa waxaa uu kaloo aas-aasay Xisbiga Nabadda iyo Horumarka (PDP) xasan sheekh Lixda Tiir ee Musharax Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijkiisa.
Soomaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo baxay wareegi kowaad ee ee Doorashada cidna kuma gulaysan, Sadex Musharax ayaa u soo Francisco Caetano Madeira iyo wakiilka gaar ee xogayaha guud ee. xildhibaan oo ka kooban Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa ku Madaxweynaha xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu raadinayaa in dib karo wareegyo dhawr ah oo u dhaxeeya labada musharax ee ugu codadka badan.
Yusra Maxamed iyo Hooyo Xaawo oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee gobolkaasi ku nool ayaa dhankooda walaac ka muujiyay arintaani. Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida ee gobolkaasi Daahir Xasan Hilowle ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ku dhawaad boqol caruur Soomaali ah ay dhici karto in schoolada laga saaro saddaxda bilood ee socota hadii aysan waalidiintooda buuxin sharuudahaasi.
Mr keating wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya aya sheegay in safarka uu ku joogo Norway u uga sii gudbi doono magaalada New York. Haddaba waxaan halkan idiinkugu soo gudbineynaa khudbaddii oo dhameystiran bal si aad wax uga xusuusataan balanqaadyadii uu sameeyey iyo waxa maanta ka qabsoomey.
Musharax xasan sheekh maxamuud iyo Image caption Qaar ka mid ah xildhibaanada maatna dooran doona hogaanka Soomaaliya Xildhibaanada Soomaaliya ayaa billaabay codeynta doorashada madaxtinimada oo dhowr jeery horay dib loogu dhigay. Laakiin qaar kormeerayaasha ah waxay ka walwalsan yihiin sida ay u noqon karto mid lagu kalsoonnaan karo.
Laakiin sida aad ka arki doonto tuduca ugu horeeya ee khudbadda, Xasan Sheekh isaga kalsooni badan ayuu ku qabay in uu ugu yaraan rajo wanaagsan leeyahay, sababtoo ah xildhibaano badan oo baarlamaanka ku jirey ayuu taageero ka heystey.
Video: Musharax xasan sheekh maxamuud iyo Musharax Shiine Culay iyo Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud
Doorashada Soomaaliya: tirinta codadka wareegga labaad oo billaabatay 8 Febraayo Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin kaabayaasha nolosha waxaan ka shaqeynaynaa sidii kor loogu qaadi lahaa nolosha muwaadinka iyo midda qoyska Soomaaliyeed, waxaan abuurayaa haddii alle yiraahdo xarumo lagu tababaro xirfadlayda iyo xoogsatada Soomaaliyeed si ay u sahlanaato inay shaqeystaan, soona saartaan noloshooda.
0 thoughts on “Musharax xasan sheekh maxamuud iyo”
Hybridisation of pcl3 compound
Jonathan tawadros of alexandria
Blitzschlag ben 10
Aa63 gtr price
Forever 21 plus size haul 2014 jeep
Daewoo cargo lahore address
Child proof cupboard locks uk yahoo
Hotel bayerwald altreichenau bewertungen fluggesellschaften
© Copyrights 2018, Musharax xasan sheekh maxamuud iyo A theme by MintTM